समतावादी काव्यचेतको धारमा, ‘समुद्र्र साउती’
आ–आफ्नो अधिकारको सुनिश्चितताको खातिर पहिचानको खोज गर्दै; बुलन्द आवाज निकालिरहेका कविको भीडमा शान्त रहेर कविता साधनामा रहेका बद्री भिखारी परिपाकपूर्ण कविता सङ्ग्रह ‘समुद्र–साउती’ लिएर देखा परेका छन् ।
शिखा बुक्सले प्रकाशन गरेको यस सङ्ग्रहमा ‘आमा र देश’, ‘विचार र चिन्तन’, ‘समय र स्वतन्त्रता’, ‘प्रेम र प्रकृति’, ‘प्रकृति र जीवन’ जस्ता क्षेत्रहरू समेटिएका जम्मा ४० थान कविताहरू छन् । काव्यिक संरचनाको पद्धतिमा रहेर काव्य प्रयोजनको मान्यतालाई शिरोपर गर्दै रचना गरिएका यी कविताहरूको उद्देश्य, समतामूलक समाज निर्माण गर्नु रहेको देखिन्छ । यसर्थ, उनी समतामूलक समाज निर्माणको पक्षधर हुन् । समतावादी सोच र विचार उनका कविताको विषय हो । उनका निम्ति ‘कविता मीठो भ्रम हो ।’ उनी भावनाको डुङ्गामा बसेर अर्धचेत अवस्थामै समतामूलक समाजतिर हेलिन पुगेका छन् ।
‘समता’ शब्दको उत्पत्ति संस्कृतबाट आएको ‘सम’ विशेषण शब्दमा ‘ता’ प्रत्यय जोडिएर बनेको देखिन्छ । ‘सम’ को अर्थ हुन्छ बराबर, समान; सङ्गीतमा लय तथा तालको विश्राम हुने ठाउँ । त्यसै गरेर ‘ता’ प्रत्ययमात्र नभएर निपात पनि हो । कुनै पनि भनाइलाई जोड दिनुपर्दा ‘ता’ को प्रयोग गरिन्छ । यसरी हेर्दा समता शब्दले बराबरी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । होचो–अग्लो; सानो–ठूलो; अथवा धनी–गरीब नभई सबैको स्तर समान हैसियतमा हुनुपर्ने अर्थमा ‘समता’ शब्दको प्रयोजन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाली बृहत् शब्दकोषले ‘समता’ शब्दलाई यसरी अथ्र्याएको छ ।
१.सम हुनाको भाव वा अवस्था; समानता; एकनासेपन; बराबरी ।
२. पक्षपात नगर्ने ढाँचा; निष्पक्षता ।
३. समान स्तरका शब्दविन्यासद्वारा आदिदेखि अन्त्यसम्म एकपद हुँदा हुने, साहित्यिक दस गुणमध्ये एक ।
व्यावहारिक सिद्धान्तको प्रयोजनबाट हेर्दा, समतावादले आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, लैङ्गिक हिसाबले मानवीय हैसियत एकनासको हुनुपर्ने; राज्यले सबैको अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै; सबै वर्ग र समुदायलाई एकै स्तरमा, एकै तहमा ल्याउनको लागि सकारात्मक विभेदको नीति निर्माण तर्जुमा गर्नुपर्ने; योजनाहरू सोही अनुरूप बनाउनुपर्ने मान्यता राख्दछ । त्यसैगरी, साहित्य सिद्धान्तको प्रयोजनबाट हेर्दा, समतावादले समतामूलक समाज निर्माणको लागि उत्प्रेरित गर्न साहित्य सिर्जना गर्नुपर्ने मात्यता राख्दछ । साहित्य सिर्जनाको रसस्वादनबाट पाठकले एकनासको आनन्दानुभूति प्रप्त गर्न सक्नु पर्दछ । वामनले रीतिवादलाई स्पष्ट पार्ने क्रममा रीतिमा गुणको भूमिका प्रमुख हुन्छ भन्दै समतालाई साहित्यको १० गुणमध्ये एक गुण मानेका छन् । उनको भनाइअनुसार समताको शब्दगुण हेर्दा आदिदेखि अन्तसम्म एउटै किसिमको रचना समता हो । अर्थगुण अनुसार हेर्दा प्रक्रमभेद नभएर सुगमता हुनु समताको अर्थगत गुण हो ।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि, समतावादी साहित्य सिर्जनामा विचलन हुनुहुँदैन । उचित शब्दसंयोजन हुनुपर्दछ । विविधताको सहभावपूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्दछ । यस सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित समग्र कविताहरूले यस्ता नियमहरूको पालना गरेको देखिन्छ । ‘बाँकी सपना’ शीर्षकको कवितालाई हेरौँः
सिमाना नाघ्दै गरेका पैतालाहरूलाई
रोकेर फर्काउनु छ गाउँमा
अभिवादनमा झुकिरहने हातहरूलाई
जिम्मा दिनु छ माटो
सडकभर पोखिएको जुलुस उठाएर
बनाउनु छ अर्को बुद्ध अट्ने सडक
बारीमा जाँगर छरेर उमार्नु छ जीवन
मैदानलाई चढाउनु छ पहाड (३२) ।
यस पङ्तिमा भएका भाव र विचारले एकरूपकताको सपना देखेको छ । सीमा नाघेका पैतालाहरूलाई फर्काउन चाहन्छ । हातहरूलाई अनावश्यक रूपले अभिवादनमा झुकाउन चाहँदैन । जोशजाँगरलाई जीवनमा समर्पित गर्ने; मैदान र पहाडलाई एकरूपमा ल्याउने कविको चाहना रहेको बुझिन्छ । यसै कविताको अर्को हरफलाई हेरौँ ः–
नदी–खोलाबाट बगिरहेको उज्यालो उठाएर
प्रत्येक घर–घरमा बाँड्नु छ
खुसीका रङहरू भर्दै जानु छ कलिला ओठहरूमा ।
खोलामा बगेर खेर गइरहेको उज्यालो कुनै घर नछुटाई बाँड्न चाहनु; प्रत्येक ओठमा खुसीका मुस्कान हेर्न चाहनु; यी सबै समतावादी काव्यचेतका उदाहरण हुन् । अन्त्यमा कविले चाहेका छन् ः–
आफैँ अडियोस् देश
आफैँ उभियोस् देश ।(३३)
अजको विश्व अस्तित्ववादी चेतनाको दौडमा छ । चाहे त्यो शक्ति प्रदर्शन गरेर होस् चाहे त्यो चामत्कारिक ज्ञान विज्ञानको प्रदर्शन गरेर होस् कुनै न कुनै रूपले हरेक मुलुक, वर्ग, समुदय र जातजातिले आ–आफ्नो अस्तित्वको खोज गरिरहेकै छन् । यही अस्तित्वको खोज गर्ने होडबाजीमा विभेदको बीजारोपण भएको बुझिन्छ । समतावादी चेतले स्वाभिमानको पक्षपोषण गर्दछ । अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दछ तर विभेदलाई स्वीकार्दैन । त्यसैले कसैको अस्तित्व गुमेकोमा कवि संवेदनशील बन्छन् । जस्तो ‘शरणार्थी’ शीर्षक कवितामा यस्तै भाव व्यक्त भएको छ ।
उनीहरूको नाम सोध्नुस्
उनीहरूले नहिच्किचाई भन्नेछन् आफ्नो नाम
भन्नेछन् आफ्नो थर
बस ! यत्ति हो उनीहरूको परिचय
तपाईं यहीँ रोकिनुस् । (३६)
उनीहरूको घर नसोध्नुहोस्
उनीहरूको देश नसोध्नुहोस् ! ! (३७)
कसैको अस्तित्व धरापमा पारेर; अर्काका अधिकारलाई हनन् गरेर; समतामूलक समाज निर्माण हुन सक्दैन भन्ने समतावादको मान्यता रहेको बुझिन्छ । ‘नटिपेर फूललाई’ शीर्षक कविताले यसको पुष्टि गर्दछ ।
मैले बोटमै छोडिदिएँ ।
मात्र स्पर्श गरेँ
धीत मरुन्जेल चुमेँ आँखाले ।
मैले फूल टिपेको भए
राख्ताराख्तै शायद हातमै ओइलाउने थियो
कि त मैले छोडिआएको मन्दिरबाट
झर्दै बग्दै पुग्थ्यो अमुक नालीमा
बेवारिश हुन्थ्यो अमुक ठेगानामा
हराउँथ्यो फोहोरको पहाडमा (५५) ।
यस कविताको दोस्रो पङ्तिले काव्यधर्म नछोडी श्लील ढङ्गले यौनावेगको राँकोलाई निभाएका छन् । काव्यमा झङ्कृत अलङ्कार यसैलाई भनिन्छ । कोही कसैको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर समताको विकास हुँदैन । समतावादी चेतनाले सम्पूर्णताको हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । सबैको एकरूपतामा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि फूल टिपिहालेको भए के हुन्थ्यो ?
एकैछिनका लागि भए पनि हेर्न उभिँदैनथे
दुःख ओढेर बसेकाहरूले
फूलमा ईश्वरले पठाइदिएको खुशी
निरन्तर साउती मार्न आउँदैनथ्यो बतास
खेल्ने ठाउँ नभएर सधैँ
समुद्रको गर्तमा लुकिरहन्थ्यो घाम । (५६)
प्रायजसो कविता सङ्ग्रहरूको नाम एउटा प्रमुख कविताको शीर्षकबाट राख्ने चलन रहेको पाइन्छ । पछिल्लो चरणमा समानता र समावेशीको मान्यता अनुरूप सङ्ग्रहभित्रका समग्र कविताहरूका प्रतिनिधित्व हुनेगरी नामकरण गर्ने प्रचलन बसेको देखिन्छ । यस सङ्ग्रहमा भने ‘समुद्र–साउती’ शीर्षकको कुनै कविता छैन । यसै कवितामा प्रयुक्त ‘साउती’ र ‘समुद्र्र’ शब्दलाई लिएर यस सङ्ग्रहको नाम ‘समुद्र्र–साउती’ राखिएको छ । यो पनि एउटा समतावादी चिन्तनको नमुना हो ।
कम्युनिष्ट विचार धाराले वर्गीय एकरूपताको वकालत गर्दछ । तर कम्युनिष्ट पार्टीले देखाएको व्यवहारप्रति प्रतीकात्मक व्यङ्ग्य गर्दै ‘तिम्रो हेडक्वाटरमा पुगेर’ शीर्षक कवितामार्फत् कवि प्रश्न गर्दछन्ः–
मलाई कम्युनिस्ट हुनु छ । (४४)
कहिलेदेखि सँगसँगै हाँस्छन्
फूल र बालकहरू ? (४५)
अफिसमा हाकिमलाई जस्तो
किन सलाम ठोकिरहेका हुन
ठूला कमरेडहरूलाई पालेदाइले ? (४६)
माक्र्सवादी चिन्तन र व्यवहारमा यस्तो विरोधाभासपूर्ण कार्य हुँदाहुँदै पनि कविले मलाई कम्युनिष्ट हुनु छैन, भनेका छैनन् । किनकि उनी माक्र्सवादी चिन्तनले प्रभावित भई, समतावादी काव्यचेतमा हेलिएका हुन् ।
समतावादी काव्यचेतको धारमा रहेका कविताहरू ः– ‘छोराको गृहकार्य’, ‘गाउँ कोलाज’, ‘नागरिकता’, ‘सिद्धार्थ’, ‘तिमीले राम्रो भनेपछि’, ‘मेनकाको डायरी’, ‘नानीहरूसित’ आदि हुन् । समसामयिक वास्तविकता र यथार्थताहरूको चित्रात्मक प्रस्तुतिसहित प्रतीकात्मक व्यङ्ग्यस्वरूप समतामूलक समाज निर्माणका बाधकहरूको उद्घाटन गर्दै समताको पक्षपोषणमा रचना गरिएका कविताहरू ‘चोर खोला’, ‘आमाको अनुहारमा देशको चित्र’, ‘भानुभक्त’, ‘आवाज’, ‘चोरऔँला’, ‘बुख्याँचा’, ‘अस्तित्व’, ‘भुसुनाहरू हिमाल चढ्न थाले’, ‘सिराहा’ आदि हुन् ।
‘ऐना’ शीर्षकको कवितामा आमालाई प्रतिनिधि पात्र बनाएर लामो समयसम्म देशले भोग्नुपरेको अन्योलतालाई सर्लक्क उतारेका छन् । ‘सिराहा शब्द–चित्र’ र ‘सिराहा’ शीर्षकको कविताले समग्र तराईमधेसको दुरुहतालाई उजागर गरेको पाइन्छ । ‘नागरिक’ शीर्षकको कविताले परनिर्भरताको पराकाष्टलाई सौन्दर्यात्मक बान्कीको शिल्पले सजाएर नेपाल र नेपालीको वास्तविकतालाई स्पष्ट पारिदिएका छन् । ‘सिद्धार्थ’ शीर्षकको कविताले मानवतावादको नवीनतम चिन्नत प्रस्तुत गरेका छन् । बुद्धलाई हामीले सधैँ शान्तिको प्रतीकको रुपमा चिन्यौँ । मानवताको पक्षमा बुद्धका उपदेशहरू फैलिएका छन्, तर बुद्धले साँच्चै मानवीयताको संरक्षण गरेका थिए त ? भन्ने प्रश्न जन्माइदिएका छन् ः
तिमीले राजपाट छोडेपछि–
शून्यले भरिएको हो
शुद्धोधनको दरबार ।
त्यसपछि प्रेमको आगोले डढेको हो
यशोधराको नारी हृदय
कङ्क्रिटझैँ कठोर बनेको हो
राहुलको नौनी मन !
तिमी बुद्ध भएपछि
तिम्रा पछि–पछि हिँडेको हो
विप्लव । (५०)
कविलाई जटिल वा दुरुह केही मन पर्दैन । सरल र कोमल नै मन पर्छ । यही मान्यताले प्रयोगवादी धाराको विरोधस्वरुप समसामयिक धाराको जन्म भयो । सरल र सहजताको नाममा कविताकै अस्तित्वमाथि प्रहार हुने गरी नाङ्गो हस्तक्षेप हुन थालेपछि कविहरू कविताको साख बचाउनका निम्ति लागि पर्न थालेको देखिन्छ ।
विभिन्न कविता गोष्ठीहरूमा हुने प्रतिनिधि कविता वाचन; साहित्यिक सङ्घसंस्थाहरूले आयोजना गर्ने एकल र सामुहिक कविता वाचन कार्यक्रमहरू यसैका उदाहरणहरू हुन् । यस्ता कार्यक्रमहरूले काव्यजगतमा केही राम्रा काम गरेता पनि साँच्चै राम्रा कविताहरूले स्थान पाएको देखिँदैन ।
कवि मनु मन्जिलका अनुसार केही साधरण कविताले कवितालाई ग्लानि हुनेगरी मञ्च पाइरहेको देखिन्छ । ‘स्वतन्त्र’ शीर्षक कविता यसको सशक्त उदाहरण हो । यस कवितामा वर्तमान काव्यजगतको व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यक्ति पाइन्छ । ‘अस्तित्व’ शीर्षकको कविताले इष्र्या, द्वेषजस्ता मानवीय प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।
कविले आफ्ना भावानुभूतिबाट सिर्जित सौन्दर्यलाई प्रस्फुटन गरी दृश्यात्मक बनाउन सक्नुपर्दछ । अर्थात् पाठक वा दर्शक सामु स्पष्टसँगले प्रदर्शन गर्नु पर्दछ; ता कि ती प्रदर्शित सौन्दर्य उनीहरूले आफ्नैजस्तो गरी ग्रहण गर्न सकून् । त्यही प्रदर्शन गर्ने कलालाई बिम्ब वा प्रतीक भनिन्छ । बिम्ब र प्रतीक आपसमा एकैजस्तो लागे पनि बिम्ब छाया हो भने प्रतीक चाहिँ स्वभावसहितको छाया हो । बिम्ब र प्रतीकको चामत्कारिक प्रयोग हुन सकेन भने कविता कमजोर हुन्छ ।
समालोचक लक्ष्मण गौतमका अनुसार साहित्यमा बिम्बले काव्यबिम्बलाई जनाउँछ । सर्जकका मानसपटलमा रहेको मानसिक तस्बिरलाई सम्मूर्तित बनाउने चित्रात्मक भाषा नै बिम्ब हो । यहाँ भएका कविताहरूमा बिम्ब र प्रतीकको प्रयोग सहजताको साथ गरेको देखिन्छ । ‘तिमीले राम्रो भनेपछि’ शीर्षक कवितामा ‘ऐना’लाई प्रतीक बनाएर ‘ओठ’, ‘यान’ जस्ता शब्दलाई बिम्बीकृत गरी कविभित्र उद्वेलित मनोभावलाई उजागर गरेको पाइन्छ ।
मेरो ऐना हेर्ने क्रम बढ्यो ।
असीमित इच्छाहरू उम्रिए
अथाह चाहहरू फैलिए
ओठसम्मै छचल्कियो खुसी
सयर गरिरह्यो मन
तिमीले ......। (७८) यो विशुद्ध प्रेम कविता हो ।
‘चिसो घाम’ शीर्षकको कविता यसको अर्को उदाहरण हो । बुबाको मृत्यु क्षणलाई टपक्क टिपेर कवितामा सर्लक्क उतार्न सफल कवि अनुभूतिको विशिष्ट अभिव्यक्ति यस कवितामा पाइन्छ । यहाँ प्रयुक्त ‘घाम’ प्रतीकको रूपमा रहेको छ भने ‘पात’, ‘फूल’, ‘शीतका थोपाहरू’, ‘हावा’, ‘आँशु’, ‘भित्ता’ आदि कुराहरू बिम्बीकृत भएका छन् ।
भोजराजले कवितालाई परिभाषित गर्दै दोषरहित, गुणसहित, अलङ्कारहरूले अलङ्कृत रसमय काव्य रचना गरेर कविले कीर्ति र लोकप्रियता वा आनन्द पाउँछ ।” भनेका छन् । उत्कृष्ट कविता हुनका लागि यी सम्पूर्णताको खाँचो छ । तर रचनामा हरेकजसो कविहरू कहीँ न कहीँ चुकिरहेकै हुन्छन् । कवि भिखारी पनि यसबाट अलग छैनन् । ‘ईश्वर’ शीर्षकको कविताको एक पङ्तिलाई हेरौँ ः–
अनन्त बाटोलाई अन्त्य गरेँ
फर्किएर बस्ती टेक्दा
उत्सव मनाउँदै रमाएका मानिस देखेँ
उत्सव मनाउनेले सुन्ने गरी छिमेकमा
आमा गुमाएको बालक रुँदै देखेँ
न उत्सव देखेर बालक हाँस्यो
न बालक देखेर उत्सव रोकियो (५३, ५४)
यो कविता मानवताको पक्षमा रचना गरिएको एक उत्कृष्ट रचना भएर पनि ‘आमा गुमाएको बालक रुँदै देखेँ ।’ हरफमा भएको पददोषका कारण अर्थबाधक बनेको देखिन्छ । यहाँ ‘रुँदै’ पदमा ‘रुँदै गरेको’ वा ‘रुएको’ भइदिएको भए अर्थमा बाधा उन्पन्न हुँदैन थियो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मानवअधिकारको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरूको सुनिश्चितताको लागि पहिचानयुक्त समावेशी, समानता र समताको धारणा अगाडि सारेको हो । वि. सं. २०६० को दशकदेखि यता नेपाली राजनीतिक वृत्तमा पहिचान, समावेशी र समानता शब्दको प्रयोग सबैभन्दा बढी प्रयोग गरियो र सबैभन्दा बढी दुरुपयोग पनि तिनै शब्दहरू भएको देखिन्छ ।
‘समता’ शब्दको प्रयोग कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले गर्न चाहेको देखिँदैन । बाध्यतावश सीमित क्षेत्रमा ‘समता’ शब्दको प्रयोग भएको देखिन्छ । साहित्य सिर्जना पनि पहिचान, अस्तित्व र समानताको विषयमा केन्द्रित भइरहेको देखिन्छ । समताको धारणा अनुसार रचनाहरू छिटफुट रूपमा देखिन थालेका थिए । कवि भिखारी समता काव्यचेतको मूलधारमा देखा परेका छन् ।
कविता नितान्त वैयक्तिक मनोभाव हो, तर कविको हृदयबाट बाहिर निस्किसक्दा नसक्दै यो निर्वैयक्तिक बनेर देखा पर्दछ । तसर्थ कविता आफैले चाहिँ कुनै पनि वाद र सिद्धान्तको अनुशरण गर्दैन तर सिर्जनाको क्रममा यस्ता वाद र सिद्धान्तहरूको लेपन कविताले साथै लिएर आएका हुन्छन् ।
भामहले काव्यबाट धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एवं कलामा निपुणता, कीर्ति, प्रीति प्रप्त हुन्छ भनेका छन् । यस भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ कि कविताको प्रयोजन व्यापक क्षेत्रमा हुन्छ । भिखारीका कविताहरू समतावादी काव्य चेतनाको धारबाट प्रवाहित भएको हुनाले सामाजिक एकरूपता कायम गर्नु उनका कविताको प्रयोजन रहेको देखिन्छ ।
इन्द्रेणीमा रहेका सबै रङ्गहरूको अस्तित्व र पहिचान जसरी रहेको हुन्छ; त्यसरी नै समाजमा रहेका सबै वर्ग, जाति, समुदाय, धर्म, भाषा, संस्कृति, परम्परको समतामूलक अस्तित्व र पहिचान रहनुपर्दछ । जसरी सबै रङहरूको परिपुरक सम्बन्ध नभई इन्द्रेणी त इन्द्रेणी रहँदैन त्यसैगरी समाजको सबै तहा र तप्कामा बराबर पँहुच कायम नरहुन्जेल समाज पनि समाजजस्तो रहँदैन । उनका बाँकी सपनाहरूले समतामूलक समाजको निर्माण गरून् । हामी सबै हातमा हात मिलाएर बाँच्न सकौँ; काँधमा काँध मिलाएर हिँड्न सकौँ । काव्यजगतमा यो दैवी स्वरले सफलता प्राप्त गरोस् ।